Barca oo la wareegtay hogaanka La Liga Messi & Suarez oo wacdaro dhigay
HomeWararka MaantaBarca oo la wareegtay hogaanka La Liga Messi & Suarez oo wacdaro dhigay
Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa shiday Barcelona kuna hogaamiyey hogaanka horyaalka Spain ee La Liga Kadib markii ay labadan ciyaaryahan shabaqa ku ruxeen shan kamid ah lix gool oo ay Barcelona garoonkeeda Nou Camp ugu xidhay kooxda Rayo Vallecano.
Suarez ayaa u dhaliyey goolka u horeeya iyo kii u dambeeyey ciyaartan ku dhamaatay 6-1 ka guusha ah halka uu Messi ka dhamaystiray saddexley 12 daqiiqo qaybtii dambe ee ciyaarta kuwaas oo uu kula sinmay tirada goolasha ee Cristiano Ronaldo horyaalkan ka dhaliyey oo ah 30 gool.
Dhinaca kalena , wuxuu kaga qaaday ku dhigay rikoodh cusub oo ah saddexleydii 24 aad ee horyaalka La Liga uu ka dhaliyo Isagoo 1 mar ka sara maray xidiga reer Portugal.
Qaybtii dambe ee ciyaarta waxaa labada kooxoodba kaadhka casaanka ah ka qaatay min hal ciyaaryahan, Rayo Waxaa laga saaray, Tito halka Barca dibada laga dhigay Dani Alves.
Real Madrid oo xallay ku kuftay Atletico Bilbao, lagagana badiyey 1-0 , waxay guushan Barcelona 6-1 ka kaga dul talaabsatay Rayo Vallecano keentay inay hogaanka Horyaalka ku dhaafto oo ka sarayso Real 1 dhibic, waxaanay kala leeyihiin 62 iyo 61 dhibcood.
Ranieri: Leicester oo 11 ciyaaryahan ahi wey garaaci lahayd Arsenal
Fifa oo kala dirtay guddiga la dagaallanka cunsuriyadda
Halyeygii Xulka Sweden Ciyaarihii Koobka Aduunka 1994-kii Oo Xanuunka Cancer u Dhintay